Hasina (zavamaniry) - Wikipedia
Ny hasina dia hazo lava taho ka eny amin'ny lohany no mivangongo ireo ravina maro somary lava mahia. Ity hazo hasina ity moa any amorontsiraka sy any an'ala no maniry sy mijoalajoala tokoa fa aty Imerina kosa dia saika nambolena amin'ny tanànan'ny Ntaolo.
Noheverin'ny ntaolo ho itoeran'ny hasina (hery) ireny zavamaniry atao hoe hasina ireny. Tsy maniriniry fahantany ny hasina taty Imerina fa matetika amin'ny tanànan'andriana na toerana masina misy vazimba sy kalanoro, ny fasan'andriana, ny fantsakan'andriana, ny doany ary ny trano itoeran'ny mpanandro, mpimasy sy mpisikidy no ambolena azy. Any amin'ny faritry ny Sakalava aza dia ny toerana misy ireo zanakandriana no hany azo ambolena izany.
Isan'ny tena niavaka ny hasina maniry ao amin'ny rovan'Antsahadinta satria dia mivady amin'ny aviavy izy ireo, toy izany koa ny hasina naniry tao Fonohasina satria dia nijoalajoala tsy nanampaharoa izy tao. Izany no ilazan'ny Ntaolo fa isan'ny hazon'andriana miaraka amin'ny amontana, aviavy, hazotokana ary hitsikitsika ny hasina. Fa amin'ireo hazon'andriana ireo anefa dia ny hasina ihany no "hazom-panandratana" ary tsy misy heviny ny zavatra ataon'ny olo-manan-kasina na zava-manan-kasina raha tsy misy ity hazo atao hoe hasina ity eo aminy. Ohatra, tamin'ny fandroan-dRalambo teo Ambohidrabiby, ireo zanakandriana virijiny no maka ny rano tsy dikain'amboa; asiana hasina maniry teo Fonohasina sy volafotsy izany rano izany ary atao amin'ny zoro alahamady ao amin'ny lapa ka androan-dRalambo amin'ny andro farany alohan'ny vava alahamady, ary rehefa vita izany dia natafy an-dRalambo ny jaky vaovao notenomin'ny zanakandriana atao hoe Andriandoriamanjaka. Ankehitrio, mbola maro ny olona no mamboly ireny hasina ireny satria inoany fa mitombo ny hasiny amin'izany koa eo akaikin'ny vavahady na ny varavarana no ambolena izany. Ny hasina àry dia entin'ny ntaolo maneho sy mampitandrina fa masina ny toerana iray anirian'ny hasina ka manainga avy hatrany ny olona mba hanaja io toerana io. Amin'ny maha hazom-panandratana azy dia saika amin'ny toerana, andaniny, hanaovana vavaka amin'ny zanahary sy ny razana no ahitana azy mba hisandratra amin'ny zanahary sy ny razana ny vavaka izay atao, ankilany, amin'ny vohitra misy andriana, mba hisandratra hatrany ny taranak'ireny andriana ireny.
Sarotra tokoa vao maniry ireny hasina ireny, ka raha maniry izy dia lazain'ny olona fa ambinina azy ilay namboly izany fa raha maty na tsy maniry ilay hasina dia heverina ho milaza loza na tsy fanambinana. Misy lahy sy vavy koa ireny hasina ireny. Isan'ny nalaza ny hasina maniry ao amin'ny rovan'Antsahadinta satria dia miray amin'ny aviavy izy. Toy izany koa ireo hasina nambolen'i mpanjaka Ralambo nanodidina ny hadivory tao Fonohasina Ambohidrabiby satria dia avo nijoalajoala tsy nanampaharoa ka nahavery anarana ilay toerana ho "Fenohasina" na "Fonohasina".
Hoy ary ny Ntaolo raha handray fitenena ka hampiseho fanetrentena: " ...Tsy ny amontana haingon'ny vohitra fa ny hasina lava marontsana tsy mandao zoro alahamady", teny entina hilazana fa na lehibe aza ny amontana, ny hasina koa mba manana ny maha-izy azy, entina hanehoana koa fa "izay maivana ihany no atoraka"...ny aviavy mantsy dia hazobe mijoalajoala, ary ny hasina hazo kelikely taho.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Hasina_(zavamaniry)&oldid=997628"
Voaova farany tamin'ny 6 Oktobra 2020 amin'ny 14:23 ity pejy ity.